अख्तियारमा राई र पौडेलबीच प्रतिस्पर्धा, ओलीको रोजाइमा को ? | रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं ३१ जेठ । संसद नियमावली पास भएर प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशी सिफारिस भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा जोशीलाई सिफारिस गरेको थियो । उता, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पद चार महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको छ । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
अख्तियारले अहिले पनि राइकै कारण खड्काको मुद्दालाई तामेलिमा राखेको छ । यसरी भ्रष्टाचारीलाई बचाउने राई आफै अख्तियारको प्रमुख बनेको खण्डमा कति भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउलान ? अख्तियार भित्रकै कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन् ।
भ्रष्टाचारी जोगाउने आदेशविरुद्ध डा.केसीको यस्तो चेतावनी
देउवाले गरेका सबै नियुक्ति र निर्णय खारेज गर्न बामदेबको सुझाब
पार्टी एकताको प्रस्ताव आफैँले राखेको अध्यक्ष प्रचण्डको खुलासा
रोल्पा मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर